तौल घटाउन को लागी पौडी को बारे मा | सबैको लागी उपयोगी जानकारी
प्रकाशित 30.09.2021 30.09.2021
पौडी खेल शारीरिक गतिविधि को लागी आदर्श हो। पौडी खेल्ने को लागी धन्यवाद, तपाइँ प्रतिरक्षा सुधार गर्न सक्नुहुन्छ, बुढेसकाल को प्रक्रिया लाई सुस्त, र सम्पूर्ण शरीर को टोन सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। उत्कृष्ट शारीरिक आकार, toned मांसपेशिहरु, राम्रो मूड र ऊर्जा को एक फट सकारात्मक पक्षहरु को एक सानो सूची मात्र हो।
पौडी खेल्ने को वजन घटाने लाभहरु निर्विवाद छन्। यो सजिलो र रमाईलो छ जबकि समग्र स्वास्थ्य मा सुधार वजन कम गर्न को लागी।
पौडी खेल को बारे मा रोचक तथ्य
पानी को सतह मा बस पनी पनी, एक व्यक्ति तौल घटाउन सक्छ। सक्रिय स्विमिंग, अर्कोतर्फ, न केवल क्यालोरी जलाउँछ, तर यो पनि मांसपेशिहरु लाई बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ। यो किन तैराकी तपाइँको प्रशिक्षण आहार मा शामिल हुनु पर्छ।
जब पौडी खेल्छन्, चयापचय उल्लेखनीय रूप मा छिटो हुन्छ। र चयापचय को त्वरण, हामी जान्दछौं, वजन घटाने को लागी योगदान गर्दछ।
जिम मा प्रशिक्षण को विपरीत, पौडी खेल्दा, हामी स्ट्रेचिंग र मांसपेशी अधिभार पाउने छैनौं।
जब हामी पौडी खेल्छौं, हाम्रो शरीर मांसपेशिहरु को उपयोग गर्दछ कि कुनै पनी अन्य तरीका बाट काम गर्न को लागी धेरै गाह्रो हुन्छ।
पानी मा व्यायाम जमीन भन्दा धेरै सजिलो छ। तेसैले, हामी को समयमा एक भारी लोड महसुस गर्दैनौं पौडी खेल्दै... र मांसपेशिहरु धेरै गहन र कुशलतापूर्वक लोड गरिनेछ।
पौडी "सुन्तला बोक्रा" को बिरूद्ध लडाई मा धेरै प्रभावी छ। पौडी खेलेर, हामी पानी को प्रतिरोध लाई पराजित गर्छौं। यस प्रकार, हामी रगत को प्रवाह मा सुधार र फ्याटी ऊतक एक एकल मौका अनावश्यक सेल्युलाईट को रूप मा जम्मा हुन दिदैनौं।
पौडी खेल्ने प्रभावकारी छाला टोन। यो अधिक लोचदार, सघन, चिकनी हुन्छ। पूल भ्रमण पछि, तपाइँ छाप पाउन सक्नुहुन्छ कि हामी एक मालिश मा भाग लिएका छौं।
पौडी खेल्नाले हृदय प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ, रक्तचापलाई स्थिर गर्दछ, रगतमा हेमोग्लोबिनको स्तर बढाउँछ, र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ।
तौल कसरी कम गर्न?
यदि तपाइँ पहिले कहिल्यै पूल भ्रमण गर्नुभएको छैन, तब यो बिस्तारै शुरू गर्न को लागी राम्रो छ। यो कुनै अन्य खेल जस्तै हो। शारीरिक गतिविधि मा एक तेज वृद्धि शरीर को लागी अवांछनीय छ।
सुरुमा, तपाइँ 30 मिनेट को लागी पौडी गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै तीव्र छैन र लामो दूरी को लागी छैन। केहि दिन पछि, तपाइँ एक घण्टा सम्म नौकायन समय ल्याउन सक्नुहुन्छ।
बिहान वा साँझ पौडनु राम्रो हुन्छ
बिहान, हाम्रो शरीर आराम र तनाव को लागी धेरै संवेदनशील छ। र हामी पूरै दिन को लागी एक ऊर्जा बढावा ग्यारेन्टी छन्। र साँझ मा हामी दिन को समयमा प्राप्त कैलोरी जलाउनेछौं। यो प्रभाव पनि प्रशिक्षण पछि उचित पोषण संग सुदृढ गर्न सकिन्छ। तर यहाँ सबै कुरा प्रत्येक व्यक्ति को लागी व्यक्तिगत छ, त्यसैले तपाइँको शरीर सुन्नुहोस् र यसको निर्देशनहरु पालना गर्नुहोस्।
चूंकि मानव शरीर को वजन पानी मा काफी कम भएको छ, पौडी खेल्ने मानिसहरु को लागी जो अधिक वजन को लागी आदर्श हो। साथै, पौडी खेल्नेहरु को लागी उपयुक्त छ जो महान शारीरिक गतिविधि मा contraindicated छन्। आखिर, तपाइँ प्राय सुन्न सक्नुहुन्छ कि डाक्टरहरु जोड्ने वा पछाडि को समस्या को कारणले कुनै पनि प्रकार को खेल मा संलग्न हुन को लागी एक व्यक्ति लाई निषेध गरीएको छ। पौडी खेल्ने समस्या को समाधान हो।
तपाइँको पौडी खेल कसरत के हुनुपर्छ?
पौडी नियमित रुपमा गर्नु पर्छ। कुनै अन्य खेल को रूप मा, प्रति हप्ता 3-4 workouts इष्टतम छन्। पौडी को अवधि बिस्तारै एक घण्टा गर्न सकिन्छ। तर तौल घटाउन को लागी पौडी खेल्ने फाइदा मात्र हुनेछ जब कसरत एक तीव्र गति मा आयोजित गरीन्छ। यदि तपाइँ मात्र एक घण्टा को लागी पानी मा झूट, तब प्रभाव न्यूनतम हुनेछ।
शरीर को प्रदर्शन को सामान्य सुदृढीकरण हुनेछ। तर क्रम मा शरीर को बोसो बाट छुटकारा पाउन को लागी, तपाइँ अझै पनी प्रयास गर्न आवश्यक छ। यो गर्न को लागी, तपाइँ निम्न योजना पालन गर्न सक्नुहुन्छ: 70% तीव्र प्रशिक्षण, 30% आराम र रिकभरी।
पुतली, ब्रेस्टस्ट्रोक र क्रल धेरै प्रभावी पौडी शैलीहरु मानिन्छ। यो तपाइँको छाती मा तैरने को लागी राम्रो छ, तपाइँ को अगाडि एक समर्थन राख्दै। यसले हामीलाई हात र खुट्टा को मांसपेशिहरु लाई बलियो बनाउन, पेट बलियो बनाउन, पक्षहरु बाहिर काम र "सीधा" मुद्रा मा मद्दत गर्नेछ। हो, स्विमिंग को रीढ़ मा एक सकारात्मक प्रभाव छ। तेसैले, जो यो ठीक गर्न चाहान्छन् पूल मा जानु पर्छ।
प्रशिक्षण अघि भूमि मा तातो गर्न निश्चित हुनुहोस्। यो प्रक्रिया मात्र 5-10 मिनेट दिनुहोस्, तब दक्षता र प्रशिक्षण को प्रभावकारिता धेरै वृद्धि हुनेछ। तपाइँ एक प्रशिक्षक जो एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हो कि तपाइँको लागी सबैभन्दा उपयुक्त छ सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। र उहाँले पठाइएको प्रविधिको शुद्धता को निगरानी पनि गर्नुहुनेछ।
तपाइँको कोच तपाइँलाई स्विमिंग शैली तपाइँको समस्या क्षेत्रमा काम गर्न को लागी प्रयोग गर्न को लागी सल्लाह दिनेछ। कसरत को तीव्रता पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। जति धेरै तपाइँ पानी मा सार्नुहुन्छ, छिटो तपाइँ वजन गुमाउनुहुनेछ। र उचित पोषण को महत्व सामान्यतया निर्विवाद छ।
यो सबै को संयोजन, तपाइँ एक छोटो समयमा अद्भुत परिणाम प्राप्त गर्नुहुनेछ। खुशी संग पौडी खेल्नुहोस् र तौल घटाउनुहोस्!
प्रेस र बटको लागि व्यायाम गर्नुहोस्: पूर्णता हासिल गर्न कसरी
सुपरस्टेट सम्पूर्ण शरीरको लागि व्यायाम हुन्। घरमा फ्याट जलाउने कसरत
पेट सुक्खा। कसरी सपाट पेट प्राप्त गर्ने?
सब भन्दा प्रभावकारी प्रविधिको - पुतली पौडी पोखरी
पछिल्लो ब्राजिलियन आहार - सजीलै तौल घटाउनुहोस्
अर्को लौंग संग ककटेल
81 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,787 प्रश्नहरू।